downloads 3 984
Ikenyeneke mbiet French ugbo elu nke elu àgwà gụnyere a complet virtual na 2D kokpiiti.
Abụọ liveries na-gụnyere: Air France na Air Force
The Bloch MB.220 bụ a French ejima-engine njem ụgbọ njem ụgbọelu wuru Société des Avions Marcel Bloch n'oge 1930s.
The MB220 bụ ihe niile na-metal ala-nku cantilever monoplane. Ọ na-kwadoro site na abụọ GNOME-Rhône radial engines na nwere a retractable ọdịda gia. Nkịtị akwọ ụgbọ bụ anọ, na ụlọ maka 16 njem, na asatọ oche ọ bụla n'akụkụ a Central wara wara. The prototype mbụ ama na December 1935, na sochiri 16 mmepụta ugbo elu. Ọ dịkarịa ala ise atụ lanahụrụ agha, ndị e gbanwetụrụ dị ka MB221 na Wright ajọ ifufe kpara R-1820-97 engines.
Site n'etiti 1938, ụdị a na-tinye n'ọrụ site Air France on European ụzọ gasị. The mbụ ọrụ nke ụdị (n'etiti Paris na London) e bubatara on 27 March 1938 na a ndokwa oge nke 1 hour 15 nkeji. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, ọtụtụ MB.220s weputa n'elu dị ka agha transports, gụnyere ọrụ German, Free French na Vichy French ikuku agha. Air France wee na-efegharị na ugbo elu (dị ka MB.221s) mgbe agha na-adịghị nso European ụzọ gasị. Ọ rere ụgbọelu anọ na 1949 ma n'ime otu afọ niile e napụrụ ọrụ.
Onye edemede: Emannuel Geffroy (Restauravia.com)